दसैंमा टीका लगाउँदा जप्ने मन्त्रको अर्थ के हो ? जानौं « dainiki
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार १२:५५
२९ असोज , काठमाडौं । हाम्रा मान्यजनहरूले दसैं टीका लगाउँदै सँस्कृतको श्लोकमार्फत आशिर्वाद त दिन्छन् तर त्यो श्लोकले के भनेको होला भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसमाथि पनि छोरा मान्छेलाई टीका लगाउँदा एकथरी र छोरी मान्छेलाई टिका लगाउँदा अर्कैथरी मन्त्र पढेने गरेको पनि पाउँछौं । यस्तो किन होला भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
हामी हाम्रो संस्कार र सँस्कृतीबारे जानकार भए पनि ती संस्कार र सँस्कृतीका कारणबारे अनविज्ञ भयौं भने पुस्तान्तरणमा समस्या देखिन सक्छ । अहिलेका नयाँ पुस्तालाई हरेक कुराको कारण चाहिन्छ । यदि हामीले ती कुराको पुष्टि गर्न सकेनौं भने नयाँ पुस्ताले स्वीकार्न गाह्रो मान्छ । हाम्रा बालबच्चामा हामीले मानेको संस्कार र सँस्कृतीको हस्तान्तरण गर्न पनि ती सबैको बारेमा पहिला आफँै जानकार हुन आवश्यक छ । अब कुरा गरौं दसैंको टीका लगाउँदा भनीने मन्त्रको ।
यस विषयमा कुनै पनि धार्मिक शास्त्र, नीति, पुराण तथा पौराणीक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छैन । यो हामी आफँैले चलाएको चलन मात्र हो । नत्र माथि उल्लेख भएको आयु द्रोण सुते… श्लोकको रचना गर्नुभन्दा पहिले दसंैमा कसैले पनि आशिर्वाद नै पाउँदैन थिए त ?
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०७८, शुक्रबार १२:५५
बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान देशभर लैजानुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी
६ मंसिर, जनकपुरधाम । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान देशभर लैजानुपर्ने बताएकी छन्
-कल्पना बोहरा ५ मंसिर, अछाम । सरकारले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको लागि स्यानेटरी प्याड निशुल्क
नुवाकोटको अजिङ्गरे माविमा चाेरी, ल्यापटप र सीसी क्यामेरा चाेरी
२२ कात्तिक, नुवाकोट । नुवाकोटको अजिङ्गरे माविमा चोरी भएको छ । चाडबाडको समयमा विद्यालय बन्द
नुवाकोटका भीमबहादुर तामाङ, जसले हेडसरको कुटाइले पढाइ छाडे (भिडियोसहित)
-प्रशान्तजंग पाण्डे १९ कात्तिक, नुवाकोट । सरकारले करोडौँ बजेट खर्च गरेर वर्षाैदेखि साक्षर नेपाल अभियान